Man City Oo Wembley Stadium Ku Gumaaday Watford Iyo Guardiola Oo Koobka FA Cupka Ku Darsaday Premier League & EFL Cupkii. - Gool24.Net
Manchester City ayaa ku guulaysatay koobka FA Cupka kadib markii ay Wembley Stadium ku xasuuqday kooxda Watford oo ay finalka tartankan iskaga hor yimaadeen.
Man City ayaa qaybtii hore ee kulankan laba gool hogaanka ku haysay kuwaas oo ay dhaliyeen David Silva iyo Gabrield Jesus waxayna ahaayeen laba gool oo ay Watford ka soo kabsan kari wayday.
Laakiin qaybtii labaad ee ciyaarta Kevin De Bruyne oo ciyaarta badal ku soo galay ayaa goolka saddexaad ee Man City dhaliyay.
Laakiin Gabrield Jesus ayaa gool dhalinta ku soo laabtay wuxuuna goolkiisa labaad ku dhaliyay goolkii afraad ee Man City ay ku burburisay Watford.
Balse dhamaadkii ciyaarta Raheem Sterling ayaa goolka shanaad iyo ee Man City ku sii bahdilay Watford waxayna City guushan ku gaadhay 6-0
Man City ayaa kuwada guulaysatay dhamaan saddexdii koob ee kubbada cagta England loogu tartamayay wuxuuna Guardiola muujiyay sida uu heer kale ugu qaaday Man City.
Kaydka: Ben Foster, Daryl Janmaat, Adam Masina, Christian Kabasele, Tom Cleverley, Isaac Success, Andre Gray.
Kaydka: Arijanet Muric, Danilo, John Stones, Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Sergio Aguero.
Manchester City ayaa doonaysay in ay dhamaystirto saddexleyda koobabka maxaliga ah ee England wuxuuna Guardiola kooxdiisa ka doonayay in ayna wax qalad ah ku hor samayn kooxda Watford.
Man City ayaa boosishan ahaan iyo fursad ahaanba ahayd kooxda ugu badan laakiin waxay muddo ku rafaaday qaabkii ay Watford shabaqa ka gaadhi lahayd.
Laakiin Watford ayaa bilawgii qaybtii hore heshay fursad ay xaalada ugu xumayn kartay Man City laakiin goolhaye Ederson ayaa sameeyay gool badbaadin cajiib ah.
Halkan ka daawo muuqaalka qaabkii uu goolhaye Edereson kooxdiisa Man City goolka cadaanka ah uga joojiyay
🧤 | HUGE save from @edersonmoraes93#EmiratesFACupFinal pic.twitter.com/5nXyELFUOB
Daqiiqadii 26 aad ayay Manchester City ugu danbayn jabisay iska caabintii Watford waxaana goolka furitaanka u saxiixay David Silva oo ka baxay abaartii gool la’aanta ahayd ee ugu xumayd waayihiisa ciyaareed ee Man City.
Silva ayaa goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay Sterling wuxuuna ahaa goolkiisii ugu horeeyay 28 kii kulan ee ugu danbeeyay waxaana gool uu dhaliyo ugu danbaysay December 30,2018 kii.
Goolkan ayaa Man City siiyay awooda buuxda ee ay ciyaarta ku sii mamushay waxayna bilaabeen in ay goolka labaad raadiyaan halka Watford ay rabtay in ay ciyaarta ku soo laabto.
Halkan ka daawo goolkii uu David Silva hogaanka ugu dhiibay kooxdiisa Man City.
Daqiiqadii 38 aad Gabriel Jesus ayaa Man City u dhaliyay goolka labad ee ay xaalada ugu sii xumeeyeen Watford inkasta oo uu markii hore Raheem Sterlin gu muuqday in uu goolkan ka xaday Gabriel Jesus balse kubbada uu Gabriel tuuray ayaa xariiqda dhaaftay taas oo uu kadib Sterling sii darbeeyay.
FA-ga ayaa goolkan u qoray Gabriel Jesus inkasta oo uu Raheem Sterling ismoodayay in uu goolkan isagu dhaliyay balse waxa uu taabtay xili ay kubbadu xariiqda dhaaftay.
Ciyaarta ayaa noqotay 2-0 ay man City hogaanka ciyaarta ku dheeraysatay sidaas ayaana qaybtii hore lagu kala nastay. Halkan ka daawo goolka Gabriel Jesus.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta Watford ayaa ahayd kooxda uu culuska ugu badani ku saarnaa in ay iska soo celiso labada gool ee laga dhaliyay halka Man City ayna wax culays ah dareemayn.
Daqiiqadii 55 aad Guardiola ayaa ciyaarta ka saaray Riyad Mahrez oo qaab ciyaareed fiican soo bandhigayay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Kevin De Bruyne.
Daqiiqadii 61 aad Kevin De Bruyne ayaa markiiba dhaliyay goolka saddexaad ee ay Man City sida dhabta ah ugu xaqiijisatay koobka FA Cupka wuxuuna goolka saddexaad ku dhaliyay caawin uu ka helay Gabriel Jesus.
Markii uu Gabriel kubbad hayadi ah u bixiyay De Bruyne ayuu xidiga reer Belgium ku waqti ku qaatay in uu dhula dhigo goolhayaha iyo difaaca hor joogay si uu goolkan u dhaliyo. Halka ka daawo goolka De Buryne.
Daqiiqadii 68 aad De Bruyne ayaa markiiba soo celiyay abaalkii gool caawinta Gabriel Jesus wuxuuna markiisa xidiga reer Brazil ka caawiyay in uu si qurux badan u dhaliyo goolka afraad ee ay Man City ku ceebaysay Watford.
Halkan ka daawo goolkii Gabriel Jesus iyo qaabkii quruxda badnayd ee uu u dhaliyay.
Ciyaarta ayaa noqotay 4-0 waxaana si buuxda loogu kala baxay finalkii FA Cupka iyada oo labada kooxoodba ay markan sugayeen in ciyaartu ay soo dhamaato.
Daqiiqadii 81 aad Man City ayaa sii wadatay goolasha daadka ah ee ay ku afrogaysay Watford waxaana goolkiisa kulankan helay Raheem Sterling kaas oo caawin ka helay Bernardo Silva si uu ciyaarta uga dhigo 5-0.
Laakiin daqiiqado kadib Raheem Sterling ayaa bahdilaad kale ku sii abuuray kooxda Watford wuxuuna raaciyay goolkiisa labaad iyo kan lixaad ee Man City.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 6-0 ay Man City ku gumaaday kooxda Watford isla markaana ay Sky Blues ugu guulaysatay kooka FA Cupka.